CO2 လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းထွင်းထုစက် - တရုတ် Dongguan Glorystar လေဆာ
ကုန်ပစ္စည်း Feature ကို CO2 လေဆာထွင်းထုနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်စီးရီးကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့် DSP ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာချမှတ်, သူတို့မြန်နှုန်းမြင့်မြင့်မားဖြတ်တောက်ခြင်းတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုရှိသည်, အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအချိုးအစားအလွန်မြင့်မားသည်။ အဓိက system ကို PC မှာချိတ်ဆက်မှုကိုမပါဘဲဦး-disk ကိုအားဖြင့်မှာထားတော်မူနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာစတာတွေအရောင်ခှဲထုတျဖြတ်တောက်ခြင်း, Non-ရပ်တန့်ပါဝါပိတ်ထားတစ်ချိန်ကဖြတ်တောက်, စက်မှုဒီဇိုင်းဒီစီးရီးစက်တိကျသောစက်မှုဆောက်လုပ်ရေးရှိပြီးအစိုင်အခဲနှင့်အတူရန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြား, တုပဖြတ်တောက်ခြင်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာရှိပါတယ် ...
CO2 လေဆာထွင်းထုနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်စီးရီးကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့် DSP ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာချမှတ်, သူတို့မြန်နှုန်းမြင့်မြင့်မားဖြတ်တောက်ခြင်းတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုရှိသည်, အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအချိုးအစားအလွန်မြင့်မားသည်။ အဓိက system ကို PC မှာချိတ်ဆက်မှုကိုမပါဘဲဦး-disk ကိုအားဖြင့်မှာထားတော်မူနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာစတာတွေကိုတုပဖြတ်တောက်ခြင်း, အရောင်ခှဲထုတျဖြတ်တောက်ခြင်း, Non-ရပ်တန့်ပါဝါပိတ်ထားတစ်ချိန်ကဖြတ်တောက်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာရှိပါတယ်
ဒီစီးရီးစက်တိကျသောစက်မှုဆောက်လုပ်ရေးရှိပြီးအစိုင်အခဲနှင့်တည်ငြိမ်ထုတ်ဘောင်နှင့်အတူရန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြား။ ဒါဟာမြန်နှုန်းမြင့်ပြင်လမ်းညွှန်ရထားလမ်းချမှတ်သည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ transmission များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေရန်မော်တာများနှင့်ယာဉ်မောင်းနင်းတင်သွင်းခဲ့သည်။
လေဆာရောင်ခြည်ပြွန်နှင့်မြင့်မားသောဖြတ်တောက်ခြင်းထိရောက်မှုရှည်လျားတသက်တာသေချာစေရန် optical system ပေါ်တွင်တင်သွင်းသည့်မှန်ဘီလူးနဲ့ကြေးမုံချမှတ်။
ထွင်းထုများနှင့်စက္ကူ, အထည်, ပလပ်စတစ်, အထည်ချုပ်နှင့်ကစားစရာစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် Non-ယက်အထည်လည်းတိကျသောအိတ်ကိုအတွက် acrylic နှင့် MDF ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့တူ Non-သတ္တုပစ္စည်းများမှဖြတ်တောက်ခြင်း, လက်အိတ်, မှို, ကြော်ငြာတွေ, အလှဆင်, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၏အားလုံးပါဝင်နိုင်၏ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ပလပ်စတစ်စက်မှုလုပ်ငန်း။
အကယ်စင်စစ်, စက္ကူ, သားရေ, အထည်, အော်ဂဲနစ်ဖန်, အစေး, acrylic, သိုးမွှေး, ပလပ်စတစ်, ရာဘာ,
ကြွေထည်ပစ္စည်း, ကျောက်သလင်း, ကျောက်စိမ်း, ဝါးနှင့်အခြား Non-သတ္တုပစ္စည်းများ။
လေဆာပါဝါ 80W / 100w / 130w / 150w
ထွင်းထုမြန်နှုန်း 0-64m / မီတာ
ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်း 0-36m / မီတာ
ထပ်ခါတလဲလဲတိကျပြတ်သားမှု ± 0.05mm
Moving စနစ် CNC ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား
Mode ကိုအေး ရေအအေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစနစ်က
အလုပ်အဖွဲ့ဗို့အား 220 ± 10% 50Hz (60Hz)
Operating အပူချိန်0င် ~ 45ºC
operating စို 5% -95%
ထိန်းချုပ်ခြင်း Software များ Glorystar လေဆာဆော့ဖျဝဲ
ဂရပ်ဖစ်ထောက်ပံ့ Format ကို PLT, AI အ, JPG, PNG, TIF, PCX, TAG,
အမတ်, IOO, GIF
နောက်တစ်ခု: စက် marking fiber လေဆာ
သတ္တုအက္ခရာ တင်. စက်
သတ္တု laser အက္ခရာ တင်. စက်
လေဆာအက္ခရာ တင်. ထိုအဖြတ်တောက်ခြင်းစက် CMA-1290T
ဝိဇ္ဇာနှင့်လက်မှုပညာအက္ခရာ တင်. / စက် GLC ဖြတ်တောက်ခြင်း -...
စက် GLC-1325 ဖြတ်တောက်ခြင်းအကြီးစားအရွယ်အစား Flat အိပ်ရာလေဆာ
ဗွီဒီယိုကင်မရာလေဆာစက် GLS-1080V ဖြတ်တောက်ခြင်း